ပြည်သူ တွေ ကို သေနတ် နဲ့ မပစ်ကြ ဖို့ တောင်းပန် လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ – GaMone Media
ပြည်သူ တွေ ကို သေနတ် နဲ့ မပစ်ကြ ဖို့ တောင်းပန် လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ
By Ga MonePosted on February 22, 2021
ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ကတော့ အနုပညာ ဝါသနာကြီးသူဖြစ်လို့ ဆရာဝန်ဘဝကို စွန့်လွတ်ပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည် လျှောက်လှမ်း နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပ ညာ အရည်အချင်း တွေကလည်း ထူးချွန်တာ ဖြစ်လို့ အချိန် ခဏလေး အတွင်း အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိခဲ့တာပါ။ နန်းမွေစံ က Photo model တစ်ယောက် အနေနဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေက ဆွဲဆောင်မှု ရှိပြီး ရင်သပ် ရှုမောဖွယ် ကောင်းတာကြောင့် ပုရိသပရိသတ် တွေကြား ရေပန်းစား လူကြိုက်များ လျှက်ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နန်းမွေစံက လက်ရှိမှာ တော့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ခေတ္တရပ်နားထား တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ရပ်တည်နေတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက် ပိုင်းက သူ မ ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် အကောင့်မှာလည်း ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ အမေရိကန် သံရုံးရှေ့ မှာ ပြည်သူ တွေနဲ့ အတူ ထိထိရောက်ရောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေ တဲ့ ပုံလေးတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေအပြင် ” I also makeastrong play in op pos it ion to military coup. All the generations in myanmar know what we faced and lost in military misrule. We cannot let that happen again. I am proud to paricipate in this protesting. ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ချစ် ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှု့စေဖို့အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြစံ ကေတာ့ အႏုပညာ ဝါသနာႀကီးသူျဖစ္လို႔ ဆရာဝန္ဘဝကို စြန႔္လြတ္ၿပီး ရဲရဲဝင့္ဝင့္ရပ္တည္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနသူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အႏုပ ညာ အရည္အခ်င္း ေတြကလည္း ထူးခြၽန္တာ ျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ ခဏေလး အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈေတြ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့တာပါ။ နန္းေမြစံ က Photo model တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြက ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိၿပီး ရင္သပ္ ရႈေမာဖြယ္ ေကာင္းတာေၾကာင့္ ပုရိသပရိသတ္ ေတြၾကား ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ား လွ်က္ရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ နန္းေမြစံက လက္ရွိမွာ ေတာ့ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေခတၱရပ္နားထား တာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီကေန႔ မနက္ ပိုင္းက သူ မ ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ အေကာင့္မွာလည္း ပုံေလးေတြကို တင္ေပးလာခဲ့ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ သံ႐ုံးေရွ႕ မွာ ျပည္သူ ေတြနဲ႔ အတူ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေန တဲ့ ပုံေလးေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံေလးေတြအျပင္ ” I also makeastrong play in op pos it ion to military coup. All the generations in myanmar know what we faced and lost in military misrule. We cannot let that happen again. I am proud to paricipate in this protesting. ” ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုလည္း ေရးသားထားတာျဖစ္လို႔ ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈ႕ေစဖို႔အတြက္ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post ၂ ငါးလုံးနေ့ အဖွင့် မနက် ခင်း မှာ ပဲ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် ရဲ့ ဝမ်းသာစရာ စကား
Next post (၂၂၂၂၂) သပိတ် မှာ ပါဝင် လာကြတဲ့ မိဘ ပြည်သူလူထု ကို မုန့်ပဲ သရေစာ နဲ့ အအေးတွေ လှူဒါန်းပြီး အားဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး